Sida ugufiican sawirada. Tilmaamaha ugu fiican | Ragga Stylish
Wax run ahaantii kugu dhacay marar badan ayaa ah inay kaa qaadaan sawirro adiguna aad ka soo baxdo wax cabsi leh. Sawirradu waa aalad wanaagsan oo lagu soo saaro xusuus laga helo waayaha nolosha. Waa shay aad ku noolaan karto maalintaada maalin si aad u xasuusato markasta oo aad rabto. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa in qabashada wajigaaga iyo jirkaaga aadan u soo bixin sida loo jecel yahay ama sida dhabta ah aad tahay. Dadka u muuqda inay ku xumaadaan wajiga waxaa loo sheegaa inaysan ahayn kuwo sawir qaada.
Halkan waxaan ku baraynaa tabaha qaar ka mid ah sida ugu fiican ee loogu muuqdo sawirrada looma baahna in lagu daydo ama la sawiro.
1 Dhoolacadee kaliya ayaa kugu filan
2 Raadi jago wanaagsan
3 Indhahaaga haku badin
Dhoolacadee kaliya ayaa kugu filan
Xaqiiqdii in kabadan hal jeer ayaa laguu sheegay inaad sawir qaadatid oo waxa ugu horeeya ee aad sameyso ay tahay inaad sameyso waji quruxsan oo doqon ah sawirka. Waa jago dadku inta badan dhigaan oo haddii aadan shaqeyn, ma ogaan doontid sidaad ku noqon doonto. Taasina way la socotaa jimicsiga wajiga Waad ku shaqeyn kartaa muuqaalka aad lahaan doonto wejiyada kala duwan ee aad ku sameyn karto muraayada horteeda. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato qaybteeda ka mid ah kuwa ugu jecel iyo sida loo sameeyo dhoola caddeyn sida ugu habboon ee ugu macquulsan sawirka.
Muuqaal kale oo aasaasi ah oo si fiican ugu muuqda sawirrada ayaa ah inaad waxyar dhoola caddeyso. Ilaa ay ka cadaato inaad si aad ah ugu raaxeysaneyso xilligan qosolkaaguna uu yahay mid dabiici ah. Haddii aad foolxumo ugu muuqato sawirka meesha qosolkaagu uu yahay mid dabiici ah, naso oo iska hubi in sidan ay dadku kuu arkayaan adiga oo qoslaya. Ka hor tan ma jirto xal suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, wax yar oo dhoola cadeynta oo dhoola cadeyntaas la shaqeeyay waxay hagaajin kartaa sida aad u eegi doonto sawirka.
Soo bixida ilkaha oo dhan markaan qosleyno waa mid ka mid qaladaadka ugu waaweyn. Haddii aan ka qosolno in ka badan intii loo baahnaa, qaar ka mid ah dhinacyada xun ee wajigeena ayaa iftiimin doona sida wareegyada madow, cagaha lugaha iyo laalaabkii laga yaabo inaan haysanno. Dhanka kale, inaad wejigaaga gebi ahaanba ka dhigto mid aad u daran waa mid aad u dhib badan. Kuuma gudbinayo wax kalsooni ah waxaana laga yaabaa inaad tahay qof fool xun oo aad u daran sidoo kale. Ku celcelinta xaaladahaas muraayadda horteeda waa waxa ugu fiican ee aad sameyn karto. Sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku ogaato waxa wejigaagu u eg yahay iyadoo lagu saleynayo culeyska aad sameyneyso. Afkaagu ha raaco dariiqa dabiiciga ah ee qosolkaaga oo ka shaqee halka aad ugu roon tahay.
Xusuusnow in adiga kaliya aad tahay qofka ay tahay inuu sifiican u ekaado. Taasi waa, raadi booska aad jeceshahay oo aadan kuwa kale ka helin. Dadku waxay jeclaan karaan weji gaar ah oo aadan jeclayn oo aadan ku qanacsanayn.
Raadi jago wanaagsan
Jagada aad ku qaadaneyso sawirka sidoo kale waa muhiim. Isku mid maaha inaad gebi ahaanba hortaada tagto marka aad wejigaaga wax yar u leexiso. Si aad u hesho muuqaal ay suuragal tahay inuu waxtar yeesho, waxaad u baahan tahay inaad xoogaa u leexiso jirkaaga. Marka xigta, kala sooci xusulka dhinaca una taageer culeyska hal miskaha in ka badan kan kale oo ha isu keenin lugaha.
Jagadan, nasashada ayaa muhiim ah. In kastoo laga yaabo inaadan garwaaqsan, marka sawirka lagaa qaado daankaaga, qoorta iyo garbaha waxaa si otomaatig ah loo geliyaa xiisad Tan waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in muuqaalku wanaagsan yahay sawirka. Dabcan, muuqaalka wanaagsan waa waxa aad u maleyneyso inuu yahay mana ahan waxa ay noqon laheyd. Kacsanaanta waxay ka caawisaa jir-dhiseyaasha inay calaamadeeyaan muruqyada ka hor kulanka tartanka. Haddii aadan aheyn dhise jirka ama aadan tartameynin, deji jirkaaga. Markay u socdaan inay sawirka kaa qaadaan, ka fikir qayb ka mid ah jirka si aad u nasato. Jirka intiisa kale keligiis wuu nasan doonaa.
Indhahaaga haku badin
Mid ka mid ah dhinacyada ay mooddo ragga sannadihii la soo dhaafay ayaa ah in indhaha la xidho si loo arko mid xiisa badan. Waa run in indhahaaga oo la xidho ay kaa dhigi karto inaad yeelato kalsooni badan oo naftaada ah, laakiin haddii aad indhahaaga aad u xiratidWaxay u muuqan doontaa inaan haysano myopia iyo inaanan xitaa arkin kaamerada.
Xiritaanka ama yaraynta indhahaaga waxay la mid tahay isku dar ah xanaaq ama u ekaansho xiiso leh. Bandhigan isku kalsoonida waa in lagu sameeyaa si xeeladeysan si uusan gebi ahaanba u caddayn ama u saameyn ku yeelan natiijadeenna.
Muuqaal kale oo xiise leh oo lagu xisaabtamayo ayaa ah xagasha laga qaadayo sawirka. Sida iska cad, dhamaanteen si fiican uma wada socon karno. Mid ka mid ah talooyinka ayaa ah in la hubiyo dhammaan sawirada aad ka muuqato oo aad aragto xaglaha ama booska aad ugu muuqato kuwa ugu fadliga badan. Had iyo jeer isku day inaad mudnaanta siiso xagalkan si aad ugu tixgeliso sawirrada mustaqbalka. Raadi waxoogaa xaglo ah (in kabadan 1) si aadan taariikhdaada oo dhan uga dhigin mid kali kali ah. Sidoo kale qofna ma doonayo inuu arko astaantaada shabakadaha bulshada ee aad had iyo jeer u baxdo si isku mid ah.
Sawiradani mararka qaar gebi ahaanba looma baahna waana kuwa ugu xun. Kaamirada hore mararka qaar nama raaceyso si ay noogu xagliso oo xaga kore xagasha kama ahan wax ku habboon. Sidaa darteed, haddii aanad haysan ikhtiyaar aan ka ahayn inaad iska qaaddo sawir-qaadashada, raadi boos ay wax badani ka ifayaan. Waxay fiirin kartaa qorraxda xitaa ama dhanka ugu weyn ee iftiinka jira. Sawirkaan, xoogaa ayuu qoortiisa u kala bixinayaa laakiin uma muuqdo qoolley ama geel.
Sidoo kale laguguma talin karo inaad dhigto wajiyo aadan u baran inaad aragto. Wax ku qabashada gacmahaaga ayaa kuu imaan kara si aad u qaadatid sawir caadi ah. Kama hadlayno inaan sameyno okey ama geesaha, fikradda ayaa ah inay u soo baxaan sidii xirashada suunkaaga, badhanka shaarkaaga, xoqida dhabarka qoortaada, qaadashada qalin ama mobile, iwm.. Taladani waxay noqon kartaa meel u dhexeysa tan ugu fiican iyo tan ugu xun. Haddii aan aad u dhabannahay, waxaan ku nacasnaan doonnaa tilmaamahan. Taas bedelkeeda, haddii aan u sameyno sida ugu macquulsan uguna macquulsan, waxay umuuqan doontaa wax fiican.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan aad ku baran doonto sida ugu fiican ee sawirrada looga dhex muuqan karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida ugufiican sawirada
Suudhka iyo kabaha